Home » LGBTQ » Orbitz lasa mpiara-miasa IGLTA manerantany
Ny fampielezan-kevitra "Travel As You Are" dia manasa ny olon-drehetra handeha amin'ny fiteniny manokana fa tsy ireo fiaraha-monina noforonina ho azy ireo
Orbitz dia manohana mandritra ny taona ny fikambanana sy ny fitsangatsanganana LGBTQ +
Orbitz dia manomboka doka vaovao ary miantso ny hetsika ho an'ireo mpandeha LGBTQ +
Ny fampielezan-kevitr'i Orbitz vaovao dia manome fahitana izao tontolo izao aorian'ny COVID 19 izay ankalazana sy fandraisana ny mpandeha lavitra
Orbitz dia nanatevin-daharana ny vondrona marika marika elita izay mpiara-miasa manerantany Fikambananan'ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena LGBTQ + (IGLTA), manohana mandritra ny taona ny fikambanana sy ny fitsangatsanganana LGBTQ +.
OrbitzNy fiaraha-miombon'antoka amin'ny IGLTA dia ampahany amin'ny fanamafisana ny tranokalan'ny fizahan-tany efa hatry ny ela ny amin'ny fitsangatsanganana. Roapolo taona taorian'ny nandefasana ny doka printy voalohany an'ny LGBTQ + izay mamporisika ireo mpandeha mba “hahita an'izao tontolo izao araka ny fehezantenanao”, dia manomboka ny doka vaovao iray i Orbitz ary miantso ny hetsika ho an'ireo mpandeha LGBTQ + satria vonona hamerina miverina ny indostrian'ny fizahan-tany.
Ny fampielezan-kevitra, "Travel As You Are," dia manasa ny olona rehetra handeha amin'ny fomba fiteniny manokana fa tsy ny fiaraha-monina noforonina ho azy ireo.
"Ny fananana masoivoho fitsangatsanganana an-tserasera toa an'i Orbitz ho mpiara-miasa dia zava-dehibe satria manamafy ny asantsika hampiroborobo ny fiarovana sy ny fitoviana ho an'ny mpandeha LGBTQ + ity," hoy ny filoham-pirenena / CEO an'ny IGLTA John Tanzella. “Ho an'ireo mpandeha LGBTQ + sy vondrom-piarahamonina maro hafa, ny fahatsapana ho voaro sy ekena no mbola miavaka fa tsy fanao mahazatra. Ankehitriny, mihoatra noho ny hatramin'izay, ny indostria misy antsika dia mila manatsara ny fahasamihafana, ny fitoviana ary ny ezaka fampidirana ary manampy amin'ny fanarenana ny dia amin'ny fomba izay ahatsapan'ny tsirairay fa manasa an'izao tontolo izao. ”
Mpaka sary LGBTQ + mpaka sary sy talen'ny Cass Bird — nalaza noho ny asany tamin'ny celebs anisan'izany ny The Obamas, Jay-Z ary Gigi Hadid — no nibaiko Mitsangatsangana toa anao, izay misy ny mpivady, namana ary talenta LGBTQ +. Ny fototry ny famoronana dia ny hiram-pirenen'i "You Not Own Me," araka ny fandraisan'ny mpanakanto mozika indie serpentwithfeet, aka Josia Young. Young no mpanakanto LGBTQ + lahy mainty hoditra voalohany nanoratra indray ny kilasin'ny feminista an'i Lesley Gore.
Rehefa afaka herintaona tsy nisy dia, ny fampielezan-kevitr'i Orbitz vaovao dia mieritreritra izao tontolo izao aorian'ny COVID 19 izay ankalazana sy fandraisana ny mpandeha lavitra. "Toko vaovao manaitaitra an'i Orbitz ity satria mampiasa vola amin'ny vokatra izay hitondra fiatraikany sy hampirisika ny fanovana eo amin'ny indostria," hoy ny talen'ny marika Orbitz, Carey Malloy.